The Ab Presents Nepal » पृथ्वीजयन्तीमा बिदा नदिनुको कारण खुलाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश !
पृथ्वीजयन्तीमा बिदा नदिनुको कारण खुलाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश !
काठमाडौं, माघ ७ -: सर्वोच्च अदालतले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिनुको कारण सरकारसँग सोधेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकारसमेत दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा बिदा माग गर्दैसर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। आधुनिक नेपाल निर्माणको मुख्य अभियानकर्ता पृथ्वी नारायणको स्मृतिमा पहिले सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको पछि हटाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदन गत साता सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ ९दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो। दर्ता नगरेकोविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले दरपीठको आदेश बदर गरेको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासबाट मुख्य रजिष्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश बदर भएको थियो। निवेदन दर्ता गर्ने आदेश पाए लगत्तै आइतबार निवेदन दर्ता भएको थियो।सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय एकता दिवसमा विदा दिई हर्ष उल्लाषका साथ मनाउन, गोरखा दरबारको संरक्षण गरी पृथ्वीनारायणको सिंगो जीवनी झल्किने संग्राहलय राख्न रिट निवेदकको माग छ। त्यसैगरी दिव्य उपदेशलाई अध्यापन गराउनलगायतका माग निवेदनमा गरिएको छ।